အလုပ်သစ်မှာ နေသားတကျဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? · MyWorld
အလုပ်သစ်မှာ နေသားတကျဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
03 Apr 00:00 by Kyi Thar Myint
အလုပ်သစ်တစ်ခုကို စတင်ဝင်ရောက်ကြတဲ့အခါ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့အတူ Exciting ဖြစ်ကြသလို၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ အဆင်ပြေပါ့မလား၊ Environment ရဲ့ Culture ကရော ကိုယ်နဲ့ Fit ဖြစ်ပါ့မလား စသဖြင့်အတွေးမျိုးစုံရှိကြတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့အောက်ဖော်ပြပါအချက်ကလေးတွေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်အသစ်မှာ အသားကျအောင်ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
အလုပ်အသစ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုအသစ်တွေနဲ့ တတ်ရောက်ကြတဲ့အခါ လုပ်တဲ့အလုပ်တိုင်းမှာ အမှားတွေရှိနေတတ်သလို မတူညီတဲ့ Duties တွေထမ်းဆောင်ရတဲ့အခါ အမှားအယွင်းတွေရှိတတ်ပြန်ပါတယ်။ အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အပြစ်တင်ပြီး အမှားတစ်ခုကို ထပ်ကာထက်ကာ မကျူးလွန်မိစေဖို့ပါပဲ။ တစ်ခုပြောချင်တာကတော့ အမှားတွေဆိုတာကလည်း သင်အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုပြောနေတာပါပဲ။ အဓိကအားဖြင့် ကိုယ်ဘယ်လောက်လုပ်နိုင်တယ်၊ တစ်နေ့တာ တာဝန်တွေကို အဆင်ပြေပြေချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်အောင်အကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ Mindset နဲ့ပဲ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို Approach လုပ်မိစေဖို့ပါပဲ။ တစ်နေ့တာတာဝန်တွေပြီးမြောက်စေဖို့ "To do list" လေးလုပ်ထားမယ်ဆိုရင် ပိုအဆင်ပြေစေမှာပါနော်။
2. Initiate from you
Colleagues အသစ်တွေနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်တဲ့အခါ အရင်ကပုံစံနဲ့မတူတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ New Challenge တစ်ခုအနေနဲ့မှတ်ယူပြီး ဆက်ဆံရေးပြေလည်အောင်ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်တစ်ခါတစ်လေ အချိန်ယူရတဲ့အပိုင်းတွေလဲရှိနေတတ်တာကို နားလည်ထားစေချင်ပါတယ်။ Colleagues အသစ်တွေနဲ့ တွေ့တဲ့အခါ 'Start to introduce yourself first and try to know their names' ပါနော်။ တစ်ခြားနည်းလမ်းလေးတွေလဲပြောပြချင်ပါသေးတယ။် ဒါကတော့ Colleagues တွေနဲ့ Coffee အတူသောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Lunch အတူတူစားခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ် အားလုံးနဲ့ ပိုမိုရင်းနှီးစေမဲ့ဆက်ဆံရေးလေးကိုလဲတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။
3. Be smart, polite and blend with others
Environment အသစ်တစ်ခုက ကိုယ်နဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ Fit ဖြစ်ဖို့မလွယ်ကူနိုင်တာမို့အချိန်ယူရသလို ကိုယ့်ဘက်ကလဲအတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားရပါမယ်။ ကြိုးစားတဲ့အပိုင်းမှာ ကိုယ့်အလုပ်ကလူတိုင်းကို နှိမ့်ချပြောဆိုဆက်ဆံခိုင်းတာမဟုတ်သလို ကိုယ့်မှန်တယ်ဆိုပြီး လက်မထောင်နေမယ်ဆိုရင်လည်း ဘယ်တော့မှ Fit ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ကိုယ်က Management Level တစ်ခုနဲ့ လုပ်တယ်ဆိုရင်တောင်မှ အပေါ်ဖားအောက်ဖိသဘောမျိုး မလုပ်ဆောင်သင့်သလို Performance ပြချင်ယုံလောက်နဲ့တော့ Environment ကို ချန်လှပ်မထားသင့်ပါဘူး။ နောက်ထပ်ပြောချင်တာကတော့ Colleagues အသစ်တွေနဲ့ပိုမိုရင်နှီးလာတာနဲ့အမျှ Environment လေးကလဲမကြာခင်မှာကိုယ်နဲ့ Fit ဖြစ်လာမှာမလွဲဧကန်ပါပဲ။
4. Try to know the culture
Culture ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုတော့နည်းနည်းရှင်းပြချင်ပါတယ် Culture ဆိုတာ လွယ်လွယ်ပြောရရင် Company ရဲ့ Type ကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင် Company ရဲ့ Mission, Value, Ethics, Expectations နဲ့ Goals တွေကလဲ Culture ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကို ရည်ညွှန်းပေးနိုင်မဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်သစ်တစ်ခုကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အရင် အလုပ်ရဲ့ Culture နဲ့ကတော့ကွာခြားမှုရှိမှာ အသေချာပါပဲ။ Sharing လုပ်ချင်တာကတော့ Culture ဆိုတာ Company တစ်ခု၊ Organization တစ်ခုရဲ့ပုံစံဖြစ်သလို ကိုယ့်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ Personality ကို ဖော်ညွှန်းနေမယ်ဆိုတာကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။
အလုပ်ထဲမှာလဲ Colleagues တွေနဲ့လဲအဆင်ပြေတယ်၊ Environment ရဲ့ Culture ကလဲ ကိုယ့်နဲ့အံ့ဝင်နေပေမဲ့ အလုပ်သွားရမှာပင်ပန်းတယ် စိတ်လဲမပါဘူးဆိုရင်တော့ ကိုယ်လက်ရှိအလုပ်က ကိုယ်နဲ့အံဝင်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိစေချင်ပါတယ်။ သိပြီဆိုတာနဲ့ Career ကိုပြောင်းလဲသင့်နေပါပြီနော်။ ဒါပေမဲ့ အလုပ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းဖို့ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အလုပ်သစ်တစ်ခုကိုစတင် Join ပြီဆို ကိုယ်ဘာလုပ်နိုင်တယ်၊ ဘာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်၊ ဘာကိုတော့အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တယ် ဆိုတာကို ကိုယ့်ကိုကိုယ်စမ်းစစ်ပြီးမှ အလုပ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်စေချင်ပါတယ်။ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခြင်းကလည်း အလုပ်မှာ ပျော်ရွှင်မှုကိုပေးနိုင်ရုံသာမက အလုပ်နဲ့လည်းအချိန်တိုအတွင်းအံ့ဝင်သွားမယ်ဆိုတာ အသေအချာပါပဲ။
အားလုံးကိုခြုံပြောရရင်တော့ အလုပ်သစ်တစ်ခုမှာ အထောက်အကူဖြစ်စေရန် အထက်ပါအချက်လေးတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့် အမြန်ဆုံး New Job မှာ အံ့ဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။